Minnows vs. Shark: Iyo Nyaya yeGamestop uye Reddit | Ehupfumi Zvemari
Ndira 27, 2021 ichaenda pasi munhoroondo se rimwe remazuva asinganetsi paStock Market, ane mhedzisiro yekupedzisira isati yazivikanwa uye izvo zvichanyatso kufundwa muzvikoro zvehupfumi semuenzaniso weko kufungidzira, kuwedzera uye makaro zvinogona kutungamira; uye njodzi yekusagadzirisa aya matatu akasiyana zvakanaka. Iyo nyaya yakatangira muchikamu chidiki chemusika wemasheya weiyo inozivikanwa Reddit portal umo nhamba huru yevarimi vadiki (minnows) yakakwanisa kutakura kuratidzira kurwisa kwakasiyana mari dzekuchengetedza uye nekugona kuvarova mumunda mavo, izvo zvekufungidzira.
1 Reddit, kutanga kwezvose
2 Kubva pamadhora gumi nemanomwe kusvika kumadhora mazana mana nemakumi mana mumasvondo matatu chete
3 Musika unopenga
4 Twitter ajoina pati
5 Uye mari uye SEC vanoitei?
6 Mabroker anopindira
7 Mari yacho inogamuchira yavo mishonga
8 Zvishoma ... kana pamwe zviuru zvemamirioni?
9 Tinogona here kushandisa mikana iyi?
10 Iyi yose hondo ichapera sei?
Reddit, kutanga kwezvose
Sezvandambotaura, mavambo eizvi zvese ari mu boka reReddit kwavanotaura nezvekudyara muStock Market. Muboka iri vanosarudza kutanga danho rakatarisana vachipesana nenzvimbo pfupi dzemari dzakasiyana dzakanangana nekambani Gamestop (vhidhiyo zvitoro). Sarudzo yemutengo haisi yakasarudzika, Gamestop ndeye kuchengetedzeka kuti kubvira 2014 yagara ichidonha izvo zvakatora kukosha kubva mukutengesa madhora makumi mashanu muna50 kungodarika $ 2014 muna2,5 uye zvakare imwe yemakambani ane mashoma kwazvo masheya pamusika, zvinoreva kuti kana zano racho rikabudirira, mhedzisiro yacho inogona kunge iri hombe.
Kubva pamadhora gumi nemanomwe kusvika kumadhora mazana mana nemakumi mana mumasvondo matatu chete
Pakati peaya mavhiki matatu mazana ezviuru evashambadzi vadiki anotanga kutenga zvikamu kudziyisa kukosha kwesitoko. Kune avo chikamu, mari hombe idzo ipfupi uye yakakwenenzverwa zvakanyanya vari kuona nzvimbo dzavo dzichiwedzera kuwedzera kuva nenjodzi uye kuti zvivimbiso zvinodiwa kuchengetedza izvi zvipfupi zviri kuwedzera. Panouya poindi yekuti kumanikidza kunova kusingatsungiririki nekuti kurasikirwa kwemari hombe kunowedzera nekukurumidza uye vanomanikidzwa kuvhara nzvimbo. Dambudziko nderei? Kuti kutenga kwaro kwese kwese kwekuvhara zvikabudura zvaro kunokonzeresa kukosha kukwira pasina kumira, kuri mumusika wemasheya kunozivikanwa se pfupi kufema uye ndiwo musungo wakakwana wemashort. Mari idzi dzinobatwa nedhimoni mweya. inoda kutenga masheya ekuvhara zvikabudura zvavo asi izvi zvinoita kukosha kwesitoko kunokwira nekuwedzera izvo zvinoita kuti kurasikirwa kwako kuve kukuru paminiti yega yega.
Pakati pezuva zuro musika chaiwo wakapenga. Chii chakaitika mune iyo $ GME kesi yakamhanya kunge moto wemusango uye izvi zvakave nemhedzisiro.
Kune rimwe divi mari yaifanira kugadzirisa zvinzvimbo mumakambani anobatsira uye akasimba kuwana mari yekuvhara zvikabudura zvavo uye izvi zvakagadzirwa madonhwe akakosha mumusika wese.
Kune rimwe divi, kuchengetedzeka pamwe nezvikamu zvepamusoro zvevapfupi zvakatanga kukwira sezvo paive nemauto maviri ekutenga: kune rimwe divi, vafungidziri vakaona sarudzo yekudzokorora nyaya ye $ GME mune kumwe kuchengetedzwa uye panguva imwechete iyo mari yakanga ichivhara zvikabudura zvavo vasati vatya kutambura kurwiswa kumwe chete. Izvi zvakakonzera makambani akaita se $ AMC $ NOK kana $ FUBO kuti akwire zvakanyanya, mamwe anosvika anopfuura mazana mana muzana.
Muchidimbu, yaive nyika yakakwenenzverwa pasi. Masheya akanaka aive achidzikira zvakanyanya panguva imwe chete apo nizi dzine huwandu hwepamusoro hwezvikabudura zvaikoshesa sefuro. A nyonganiso uye zvisati zvamboitika.
Twitter ajoina pati
Kana paine kusagadzikana kukuru nenyaya iyi yese, Elon Musk (CEO weTesla) naChamath Palihapitiya (CEO weVirgin Galactic uye mumwe wevatengesi vakuru mumusika) ajoina bato nekuvhura ma tweets maviri ayo anobatsira kuwedzera kukwira kumusoro ne Gamestop.
Mazhinji $ GME taura soooooo….
Takatenga Feb $ 115 kufona $ GME mangwanani ano.
Handeioooooo !!!!!!!! https://t.co/XhOKL1fgKN pic.twitter.com/rbcB3Igl15
Panyaya yaElon, hazvizivikanwe kana akatenga chaizvo masheya kana kuti aingopinda mumugodhi mutsva (imwezve munhoroondo yake refu). Panyaya yaChamath, kana akashambadza kutenga kwake nekutengesa ne x7 yemari inowanikwa. Gare gare akazivisa kuti ari kuzopa zvese zvakanakira kutengeserana uku. Chokwadi anokurudzirwa nekuti ari kuzomhanyira Gavhuna weCalifornia uye hazvina kunaka kuti mukwikwidzi awane mamirioni achifungidzira pachena mumusika ...
Uye mari uye SEC vanoitei?
Ipo izvi zvese zvaiitika, mari yacho yanga ichiedza kugadzirisa mamiriro ezvinhu nekuita nzira dzeveruzhinji kumaterevhizheni network muUnited States. achizivisa kuti vanga vatovhara zvikabudura uye vadzivirirwa. Asi chero munhu ane nzwisiso yakanaka yemashandisirwo eStock Market aiziva kuti izvi zvaive zvisiri zvechokwadi, kuti ivo vaingoedza kudzikisira kutsunga kwevashoma uye kumisa kurwiswa. Zano racho harina kushanda uye kumanikidza hakuna kudonha asi hakuna kumira kukwira nepfuti yatove pamusoro pe $ 340.
Iyo SEC yechikamu chayo yakatarisa Bato pasina kuita. Uye izvi zvine zvarinofunga sezvo izvo zvaiitika zvaive zvisina kujairika zvachose, kwaive iko kushanda kweiyo musika wemasheya nemitemo yayo yakajairwa. Ivo vakangomisa iyo $ GME quote kwemaminetsi mashoma, asi hapana chakakodzera.
Apo zuva racho richienderera mberi, chiitiko chisina kujairika chakaitika uye icho mumaonero angu ndoga zvaisafanirwa kunge zvakaitika. Vatengesi vanoverengeka muUnited States vanosarudza vhara mashandiro ese pane iyo $ GME t $ AMC kuchengetedzwa. Iyi danho rekusuwa rakatsvaga kuchengetedza yakaderera mari uye kutyora kwakazara kwemitemo yemutambo. Ivo vaive vachidzivirira zvakajairika mashandiro mumusika uye pasina chero chiratidzo kubva kune anokwanisa mutongi.
Kunyangwe vamwe vatambi vanoenderana vanokumbira kumisa mipiro kuitira kuti iyo Makambani Makuru inogona kudzikamisa zvakare nzvimbo dzayo uye kurwisa kurwiswa uku. Ndinoona zvisingatendeseki kuti vangashinga kukumbira chinhu chakadai paruzhinji uye vasina chero nyadzi.
Nasdaq CEO Inopa Halt kune Kutengesa Kubvumidza Vakuru Vemari 'Kuti Vadzokerezve Ivo Nzvimbo' Kurwisa Reddit Vashandisi https://t.co/UymE6bfuT2
Ngatisakanganwe kuti izvo zvaiitika zvaive zvakangojairika uye izvo akateerera mitemo yose yemusika. Mutengo wechikamu unosarudzwa nevaya vanotenga nekutengesa uye hapana mumwe munhu.
Mari yacho inogamuchira yavo mishonga
Asi ini ndinoenda kumberi, hazvisi kuti izvo zvaiitika zvaive zvakajairika asi kuti irwo rudzi rwekushanda iro mari zhinji dzave kushandisa kwemakore kuti dziwane purofiti kubva kumusika. Ndeipi pfungwa yekuti kana homwe iri kudzipura minnji, hapana munhu anoita chero chinhu kunze kwekupindira mumusika panoitika zvinopesana? Kwandiri hapana kupfuura izvo vane simba vanogara vachidzivirirana.
Kwakatangira rese dambudziko iri hakusi mapfupi nzvimbo asi kuwandisa kwakanyanyisa. Dai mari idzodzo dzisina kubhadharwa zvakanyanya vangadai vakavhara nzvimbo dzavo zvinogamuchirwa. Asi chokwadi, apa hazvikodzere kuhwina uine pfupi chinzvimbo, apa makaro anoita kuti zvive zvakakosha kuti iwe uzviite wakakwenenzverwa neakakwira akawanda kuti zviwanikwe zvihombe. Izvo zvinoita sekunge zvaive zvisina kujeka ndezvekuti mukana uyu haungoreve hukuru chete mabhenefiti, asiwo njodzi uye zvinogona kurasikirwa zvinowedzerwazve.
Zvishoma ... kana pamwe zviuru zvemamirioni?
Chinhu chakakosha kucherechedza ndechekuti kurwiswa uku hakuna kunyatso kurongedzwa nevashambadziri vadiki kweupenyu hwese asi vatyairi vakaronga vadiki varimari varikuwana musika kuburikidza mapuratifomu ekutengesa saRobinhood uko chikamu chekutengesa chakasanganiswa neye social network chikamu. Ivo havasi vatengesi vanoona pamusika wemari sekudyara kwenguva refu kwaunogona kuwana kudzoka pane yako mari asi se mutambo wekutamba wakafanana chaizvo nekutamba mitambo. Ivo vashoma, hongu, ... asi kwete zvakajairika vashoma investor izvo munhu wese zvaano funga.
Nekuva nechinhu ichi chinotamba uye chinodhakwa, ava vashoma vari kuda kurasikirwa ne100% yemari yavo uye vanokwanisa gamuchira nhanho dzenjodzi dzakakwirira zvakanyanya kupfuura musimi muzvinashawo. Uye ndizvozvo chaizvo nei kushanda uchipesana navo iri basa rakaoma, nekuti ivo vanokwanisa kuchengetedza bheji kupfuura zvinonzwisisika.
Tinogona here kushandisa mikana iyi?
Kana iwe ukaverenga kusvika pari zvino muchinyorwa, saka ndinofunga unofanirwa kuve pachena kuti kupinda mukushanda kwerudzi urwu kune njodzi zvakanyanya uye une zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Iko kukosha kwe $ GME kwakazara zvakakwana mweya uye nekukurumidza kana gare gare ichafanirwa kudzoreredza tsika dzayo dzakapfuura uye kutengesa muhurongwa hwe $ 10-15 pamugove. Izvo zvakati, zvinogona kutaridza kunakidza kutora iwo mukana uye kupfupika pa $ GME uye mirira kuti donhwe riitike… asi nekuita izvi unenge uchinge uchinyatsoita chikanganiso chakafanana nemari uye iwe hauzive kuti vachakwanisa kutakura zvakadii kukosha kwechitoro. PaReddit ivo vari kutaura nezve chinangwa che $ 1.000 XNUMX, ungagona here chengeta izvo zvarasikirwa zvisina kutengeswa? Ini ndato kutokuudza kuti ruzhinji rwevanhu harungakwanise.
Uye zvese izvi ndinotaura ndisingasanganisi chero rudzi rwekuwedzera. Kana iwe uchinge wakakwenenzverwa saka ndeyechokwadi yeRussia roulette mune kukosha ine kwakakura kusagadzikana uye unokwanisa kukwira nekudzika 30% mumaminetsi mashoma.
Iyi yose hondo ichapera sei?
Chikamu chekupedzisira chehondo iyi hachisati chanyorwa. Musika hausati wavhurwa zviri pamutemo muUSA uye $ GME stock yatopfuura $ 500 mune pre-musika saka chero chinhu chinogona kuitika. Kubhejera kunoitwa nevatengesi veReddit kuunza kukosha kune $ 1.000 XNUMX kunoratidzika kunge kwakasimba. Parizvino chinhu chega chatiri kujekesa nezvacho ndechekuti boka hombe revashambadzi rakapararira pasirese uye rakarongeka kuburikidza neforamu vakakwanisa kuisa hurongwa mukutarisa nekugadzira zvimwe kurasikirwa kweanopfuura madhora manomwe bhiriyoni kune akati wandei emari hombe yekudyara pasi rose. Chimwe chinhu icho mwedzi mishoma yapfuura chakaratidzika kunge chisingagone kufungidzira.
Chinhu chega chandinacho 100% chakajeka ndechekuti kana iwe ukaisa mari muStock Market unofanirwa kugara kure sezvinobvira kubva mune ino kesi uye edza kuona mabhuru edziviriro. Asi zvirokwazvo uchapedzisira wagwazwa nekurohwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Minnows vs. Shark: Iyo Nyaya yeGamestop uye Reddit
Yakanaka chinyorwa chako, iwe unopfupisa muchidimbu, asi zvakajeka mamiriro akaomarara ayo, sekutaura kwako, zviri nani kuona kubva padivi.
Kuzvishandira kushaya basa